चीन कसरी प्लास्टिकको भागहरू डिजाइन गर्ने र उत्पादक | मेस्टेक
डिजाइन र प्रोटोटाइप
To प्लास्टिकको भागहरू डिजाइन गर्नुहोस्भागको आकार, आकार र शुद्धता परिभाषित गर्नु हो, भूमिकामा भागहरूमा उत्पादित हुने भूमिकामा, र प्लास्टिकको लागि मोल्डिंग प्रक्रियाको नियमको आधारमा। अन्तिम आउटपुट मोल्ड र प्लास्टिकको भागको निर्माणको लागि चित्रहरू हो।
उत्पाद निर्माण डिजाइनको साथ सुरु हुन्छ। प्लास्टिकको पार्ट्सको डिजाईनले सीधा उत्पादनको आन्तरिक संरचना, लागत र प्रकार्यको प्राप्तिलाई निर्धारित गर्दछ, र मोल्ड उत्पादन, लागत र चक्र, साथै इंजेक्शन मोल्डिंग र पोस्ट-प्रसंस्करण प्रक्रिया र लागतको अर्को चरण पनि निर्धारित गर्दछ।
प्लास्टिकको पार्ट्स आधुनिक समाजमा विभिन्न उत्पादनहरू, सुविधाहरू र व्यक्तिको जीवनमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। प्लास्टिक भागहरूलाई बिभिन्न आकृतिहरू र प्रकार्यहरू आवश्यक पर्दछ। तिनीहरू प्लास्टिकका सामग्रीहरू प्रयोग गर्छन् र तिनीहरूको सम्पत्तीहरू फरक-फरक हुन्छन्। एकै साथ उद्योगमा प्लास्टिकका भागहरू बनाउने धेरै तरिकाहरू छन्। त्यसोभए प्लास्टिकको पार्ट्स डिजाइन गर्नु साधारण काम होइन।
बिभिन्न भाग डिजाइन र सामग्री फरक प्रोसेसिंग उत्पादन गरिन्छ। मोल्डिंग प्लास्टिकको लागि प्रशोधनमा मुख्यतया तल समावेश गर्दछ:
२. उड्ने मोल्डिंग
3.com प्रेसन मोल्डिंग
त्यहाँ धेरै उत्पादन गर्न धेरै तरीका छन्। इंजेक्शन मोल्डिंग लोकप्रिय विनिर्माण विधि हो, किनकि इन्जेक्शन मोल्ड गरिएको %०% ~ %०% प्लास्टिक भागहरू byb इंजेक्शन मोल्डिंग द्वारा उत्पादित हुन्छन्, यो एक उच्च-गति उत्पादन क्षमता हो।
हामीले डिजाइन गरेका केही प्लास्टिक भागहरूका लागि केस देखाउनुहोस्:
दर्शन फोनको प्लास्टिक संलग्नक
म्याकेनिज्मको प्लास्टिक भागहरू
इलेक्ट्रोनिक को प्लास्टिक केसहरु
उपकरणको लागि प्लास्टिक आवास
तल हामी तीन पक्षमा प्लास्टिक भागहरू डिजाइन गर्ने तरिका विस्तार गर्दछौं
* प्लास्टिकको भागहरू डिजाइन गर्नका लागि १० सल्लाहहरू तपाईंलाई थाहा हुनुपर्दछ
१. उत्पादन को आकार डिजाइन र आकार निर्धारित गर्नुहोस्।
सम्पूर्ण डिजाइन प्रक्रियामा यो पहिलो चरण हो। बजार अनुसन्धान र ग्राहक आवश्यकता अनुसार, उत्पादन को उपस्थिति र समारोह निर्धारित गर्नुहोस्, र उत्पादन विकास कार्यहरू बनाउनुहोस्।
विकास कार्यका अनुसार, विकास टोलीले उत्पादनलाई प्राविधिक र प्राविधिक सम्भाव्यता विश्लेषण पुर्‍याउँछ, र उत्पादको थ्रीडी उपस्थिति मोडेल निर्माण गर्दछ। त्यसो भए, प्रकार्य अनुभूति र उत्पाद सम्बन्धी अनुसार, सम्भावित भागहरू योजनाबद्ध छन्।
२. उत्पाद रेखाचित्रबाट व्यक्तिगत भागहरू अलग गर्नुहोस्, प्लास्टिक भागहरूका लागि प्लास्टिक राल प्रकार छान्नुहोस्
अघिल्लो चरणमा प्राप्त थ्रीडी मोडेलबाट भागहरू अलग गर्नु र तिनीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा डिजाईन गर्न यो चरण हो। भागहरूको कार्यात्मक आवश्यकता अनुसार, उपयुक्त प्लास्टिक कच्चा माल वा हार्डवेयर सामग्री छान्नुहोस्। उदाहरण को लागी, ABS सामान्यतया
शेल, एबीएस / बीसी वा पीसीसँग केहि मेकानिकल गुणहरू, पारदर्शी भागहरू जस्तै ल्याम्पशेड, चिराग पीएमएमए वा पीसी, गियर वा लगाउने भागहरू पोम वा नायलन हुनु आवश्यक छ।
भागहरूको सामग्री चयन गरेपछि, विस्तृत डिजाइन सुरु गर्न सकिन्छ।
D.Dafine ड्राफ्ट कोण
ड्राफ्ट एles्गलले मोल्डबाट प्लास्टिक हटाउने अनुमति दिन्छ। ड्राफ्ट कोण बिना, भाग हटाउने समयमा घर्षणको कारण महत्त्वपूर्ण प्रतिरोध प्रस्ताव गर्दछ। ड्राफ्ट एles्गल भागको भित्री र बाहिरी भागमा हुनुपर्दछ। गहिराइको भाग, ठूलो ड्राफ्ट कोण। औंठाको साधारण नियममा प्रति ईन्च १ डिग्री ड्राफ्ट कोण हुनुपर्दछ। पर्याप्त ड्राफ्ट ए angle्गल नभएको खण्डको पक्षहरू र / वा ठूलो इजेक्टर पिन मार्कहरू (यसमा पछि बढि) का परिणामहरू हुन सक्छन्।
बाहिरी सतहको कोण ड्राफ्ट कोण: गहिरो भाग, ड्राफ्ट कोण ठूलो छ। औंठाको साधारण नियममा प्रति ईन्च १ डिग्री ड्राफ्ट कोण हुनुपर्दछ। पर्याप्त ड्राफ्ट ए angle्गल नभएको खण्डको पक्षहरू र / वा ठूलो इजेक्टर पिन मार्कहरू (यसमा पछि बढि) का परिणामहरू हुन सक्छन्।
सामान्यतया, राम्रो हेर्ने सतह पाउनको लागि, भागहरू को सतहमा बनावट हुन्छ। बनावटको भित्ता असभ्य छ, घर्षण ठूलो छ, र यसलाई गुहाबाट हटाउन सजिलो छैन, त्यसैले यसलाई ठूलो रेखाचित्र कोण चाहिन्छ। मोटा बनावट, ठूलो ड्राफ्टि angle कोण आवश्यक छ।
Ef. परिभाषित भित्ता मोटाई / वर्दी मोटाई
ठोस आकार मोल्डिंग निम्न कारणहरूले गर्दा इंजेक्शन मोल्डिंगमा चाहँदैन:
१) .कुल गर्ने समय भित्ता मोटाईको वर्गमा समानुपातिक हुन्छ। ठोसका लागि लामो चिसो समयले ठूलो उत्पादनको अर्थव्यवस्थालाई हराउनेछ। (तातो को कन्डक्टर)
२)। टिकर सेक्शन पातलो खण्ड भन्दा धेरै सिकुन्, यसैले भिन्न सink्ग्रहणको परिचय दिन्छ जसको परिणामस्वरूप वारपेज वा सिंक मार्क इत्यादि (प्लास्टिकको स्राव बिशेषता र pvT विशेषताहरु)
त्यसकारण हामीसँग प्लास्टिकको भाग डिजाइनका लागि आधारभूत नियम छ; जहाँसम्म सम्भव पर्खाल मोटाई एकसमान वा भाग बाहिर स्थिर हुनुपर्छ। यो भित्ता मोटाई नाममात्र भित्ता मोटाई हो।
यदि भागमा कुनै ठोस खण्ड छ भने, यसलाई कोरको परिचय दिएर खोक्रो बनाउनु पर्छ। यसले कोर वरिपरि एक समान भित्ता मोटाई सुनिश्चित गर्नुपर्दछ।
))। भित्ता मोटाई निर्णय गर्नका लागि के विचारहरू छन्?
यो कामको लागि मोटो र कडा हुनुपर्दछ। भित्ता मोटाई ०. to देखि mm मिमी हुन सक्छ।
यो छिटो चिसो हुन पनि पातलो हुनुपर्दछ, न्यून भागको तौल र उच्च उत्पादकताको परिणाम स्वरूप।
भित्ता मोटाईमा कुनै पनि भिन्नता सकेसम्म न्यूनतम राख्नु पर्छ।
भिन्न पर्खाल मोटाई संग एक प्लास्टिक भाग फरक कूलि rates दर र फरक संकोचन अनुभव हुनेछ। यस्तो अवस्थामा निकट सहिष्णुता प्राप्त गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ र धेरै पटक असम्भव हुन्छ। जहाँ भित्ता मोटाई भिन्नता आवश्यक छ, दुई बीचको संक्रमण क्रमिक हुनुपर्दछ।
Parts.बीसका बीच कनेक्शन डिजाइन
सामान्यतया हामीले दुईवटा खाकाहरू सँगै जोड्नु पर्छ। आन्तरिक कम्पोनेन्टहरू (PCB असेंबली वा म्याकेनिमेसन) राख्न तिनीहरूको बीचमा एक बन्द कोठा गठन गर्न।
सामान्य प्रकारको कनेक्शन:
१) स्न्याप हुकहरू:
स्न्याप हुक जडान सामान्यतया साना र मध्यम आकारका उत्पादनहरूमा प्रयोग हुन्छ। यसको विशेषता यो हो कि स्न्याप हुक सामान्यतया भागहरूको किनारमा सेट गरिन्छ, र उत्पाद आकार सानो बनाउन सकिन्छ। जब भेला हुन्छ, यो स्क्रू ड्राईभर, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग मर्ने र अन्य जस्ता कुनै उपकरणहरू बिना सिधा बन्द हुन्छ। गैरकानुनी यो हो कि स्न्याप हुकहरूले मोल्ड बढी जटिल बनाउन सक्छ। स्लाइड मेकानिजम र लिफ्टर मेकानिजमलाई स्नैप हुक जडानलाई महसुस गर्न र मोल्ड लागत बढाउन आवश्यक छ।
२)। पेंच जोड्ने:
पेंच जोड्ने दृढ र भरपर्दो छ। विशेष रूपमा, स्क्रू + नट फिक्ससन धेरै विश्वसनीय र टिकाऊ हो, यसले कुनै क्र्याक्सविना बहु विपत्तिहरूलाई अनुमति दिन्छ। पेच कनेक्शन ठूलो ताल्चा लगाउने बल र बहु ​​विस्थापनको साथ उत्पादनहरूको लागि उपयुक्त छ। गैरकानुनी यो हो कि स्क्रू स्तम्भले अधिक ठाउँ लिन्छ।
))। माउन्टिंग बॉसहरू:
माउन्टिंग बॉस जडान भनेको मालिक र प्वालहरू बीचको कडा समन्वयले दुई भागहरू ठीक गर्नु हो। जडानको यो तरीका असक्षम उत्पादनहरूलाई अनुमति दिन पर्याप्त बलियो छैन। बेफाइदाको कुरा यो छ कि ताला लगाउने शक्ति घट्ने छ जब टाँस्नेपसनको समय बढ्दै जान्छ।
))। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग:
अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग दुई भागहरू अल्ट्रासोनिक मोल्डमा राखेर संपर्क सतहलाई फ्यूज गरेर अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग मेशिनको कार्य अन्तर्गत हो। उत्पाद आकार सानो हुन सक्दछ, इन्जेक्शन मोल्ड अपेक्षाकृत सरल छ, र जडान फर्म हो। नोक्सान अल्ट्रासोनिक मोल्ड र अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग मेशिनको प्रयोग हो, उत्पाद आकार धेरै ठूलो हुन सक्दैन। विघटनपछि, अल्ट्रासोनिक भागहरू फेरि प्रयोग गर्न सकिँदैन।
अन्डरकट्स आइटमहरू हुन् जुन मोल्डको आधा हटाउनमा हस्तक्षेप गर्दछन्। अन्डरकट्स डिजाइनको लगभग जहाँसुकै देखा पर्न सक्छ। यिनीहरू यस्तै अस्वीकार्य छन्, यदि त्यस भागमा ड्राफ्ट ए angle्गलको अभाव भन्दा खराब छैन। यद्यपि, केहि अण्डकुटहरू आवश्यक छन् र / वा अपरिहार्य छन्। ती उदाहरणहरुमा, आवश्यक छ
अन्डरकट्स मोल्डमा स्लाइडिंग / मुभिंग पार्ट्स द्वारा उत्पादन गरिन्छ।
यो कुरा मनमा राख्नुहोस् कि मोल्ड उत्पादन गर्ने बेला अंडरकटहरू सिर्जना गर्नु अधिक महँगो हुन्छ र यसलाई न्यूनतम राख्नुपर्दछ।
S.समर्थन पसलियाँ / गसेट्स
प्लास्टिकको भागमा पसलहरू कडाई (लोड र पार्ट डिफेक्शन बिचको सम्बन्ध) को सुधार गर्दछ र कठोरता बढाउँदछ। यसले पानाको दिशामा पग्लने बगैंचामा हतार गर्ने भएकोले यसले मोल्ड-क्षमता बढाउँछ।
रिबहरू अधिकतम तनाव र अंशको गैर-उपस्थिति सतहहरूमा विक्षेपणको दिशामा राखिन्छ। मोल्ड फिलि।, सink्कुचन र इजेजेसनले रिब प्लेसमेन्ट निर्णयहरूमा पनि असर पार्नु पर्दछ।
ठाडो पर्खालमा सम्मिलित नहुने रिबहरू अचानक अन्त्य हुँदैन। नाममात्र भित्तामा क्रमिक संक्रमणले तनाव एकाग्रताको लागि जोखिम कम गर्नुपर्दछ।
रिब - आयामहरू
पसलहरूमा निम्न आयामहरू हुनुपर्दछ।
सिब मार्कबाट बच्नको निम्ति रिब मोटाई ०. to देखि ०. times गुणा नाममात्र भित्ता मोटाई बीचमा हुनुपर्छ।
रिब उचाई २. to देखि times गुणा नाममात्र भित्ता मोटाई हुनुपर्छ।
रिबको इजेक्शन सहज बनाउन ०. to देखि १.-डिग्री ड्राफ्ट ए angle्गल हुनुपर्दछ।
रिब बेस ०.55 देखि ०.। गुणा त्रिमाताको बहुमतको मोटाई हुनुपर्दछ।
दुई पसलहरु बीचको दूरी २ देखि times पटक (वा अधिक) नाममात्र भित्ता मोटाई हुनु पर्छ।
R. रेडियोज्ड एज
जब दुई सतहहरू मिल्छन्, यसले कुनाको गठन गर्दछ। कुनामा, पर्खाल मोटाई नाममात्र भित्ता मोटाई १.4 गुणा बढ्छ। यसले भिन्न सink्कलन र मोल्ड-इन स्ट्रेस र लामो कूलि time समयको परिणाम दिन्छ। त्यसकारण, सेवामा असफलताको जोखिम तीब्र कुनाहरूमा बढ्छ।
यो समस्या समाधान गर्न, कुनाहरू त्रिज्याको साथ माटोको बनाउनु पर्छ। रेडियस बाह्य र आन्तरिक रूपमा प्रदान गरिनु पर्दछ। आन्तरिक तीखो कुनामा कहिले पनि नराख्नुहोस् यसले क्र्याकलाई बढावा दिन्छ। त्रिज्या त्यस्तो हुनुपर्दछ कि तिनीहरूले स्थिर पर्खाल मोटाई नियमको पुष्टि गरे। कुनाहरूमा ०. to देखि ०.7575 गुणा पर्खाल मोटाई को दायरा हुनु राम्रो हुन्छ। कहिल्यै आन्तरिक तीक्ष्ण कुना भएको छैन किनकि यसले दरारलाई बढावा दिन्छ
9. स्क्रू बॉस डिजाइन
हामी जहिले पनि दुई आधा केसहरू सँगै मिलाउन स्क्रूको प्रयोग गर्दछौं, वा पीसीबीए वा अन्य कम्पोनेन्टहरू प्लास्टिकको भागहरूमा जोड्दछौं। त्यसैले स्क्रू बॉसहरू स्क्रू गर्न र निश्चित भागहरूमा संरचना हुन्।
स्क्रू बॉस आकारमा बेलनाकार छ। मालिकलाई आमाको भागको साथ आधारमा लिंक गर्न सकिन्छ वा यो छेउमा जोडिएको हुन सक्छ। छेउमा लिinking्क गर्नाले प्लास्टिकको बाक्लो खण्डमा परिणाम हुन सक्छ, जुन आवश्यक छैन किनकि यसले सिंक मार्क निम्त्याउन सक्छ र चिसो समय बढाउन सक्छ। स्केचमा देखाइएको अनुसार साइड को पर्खालमा रिब्को माध्यमबाट बॉसलाई जोड्दै यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। मालिकलाई कट्टर पट्टिहरू प्रदान गरेर कठोर बनाउन सकिन्छ।
भाँडामा स्क्रू केही अन्य भाग जोड्न प्रयोग गरिन्छ। त्यहाँ स्क्रूको थ्रेड फार्मिंग प्रकार प्रकार र स्क्रूको ट्रेडिंग काटि type्ग प्रकार छन्। थ्रेड फार्मिंग स्क्रूलाई थर्माप्लास्टिक र थ्रेड कटि। स्क्रू अनअलास्टिक थर्मोसेट प्लास्टिक भागहरूमा प्रयोग गरिन्छ।
थ्रेड बनाउने स्क्रूले मालिकको आन्तरिक भित्तामा चिसो प्रवाह द्वारा महिला थ्रेडहरू उत्पादन गर्दछ - प्लास्टिक स्थानीय रूपमा काट्नुको सट्टा विकृत हुन्छ।
स्क्रू इन्सुलेशन बलहरू र सेवामा स्क्रूमा राखिएको लोडको सामना गर्न स्क्रु बॉसले उचित आयामहरू आवश्यक छ।
पेचको सापेक्ष बोरको आकार धागो स्ट्रिपिंग र स्क्रु पुल आउट गर्न प्रतिरोधको लागि महत्वपूर्ण छ।
मालिक बाहिरी व्यास हुप स्ट्रेशको कारण धागो गठनको सामना गर्न पर्याप्त ठूलो हुनुपर्छ।
बोरको छोटो लम्बाइको लागि प्रविष्टि अवकाशमा थोरै व्यास छ। यसले ड्राइभ गर्नु अघि स्क्रू पत्ता लगाउन मद्दत गर्दछ। यसले मालिकको खुल्ला अन्तमा तनाव कम गर्दछ।
पोलिमर निर्माताहरूले उनीहरूका सामग्रीहरूको लागि मालिकको आयाम निर्धारणका लागि दिशानिर्देश दिन्छन्। स्क्रू निर्माताहरूले पेंचको लागि सही बोर साइजको लागि दिशानिर्देशहरू पनि दिन्छन्।
मालिकमा स्क्रू बोर वरिपरि कडा वेल्ड जोड़हरू सुनिश्चित गर्न सावधानी अपनाउनुपर्दछ।
मालिकमा मोल्ड-इन स्ट्रेसबाट बच्न सावधानी अपनाउनु पर्छ किनकि यो आक्रामक वातावरण अन्तर्गत असफल हुन सक्छ।
मालिकमा बोर थ्रेडको गहिराई भन्दा गहिरो हुनुपर्छ।
10. सतह सजावट
कहिलेकाँही, राम्रो रूप प्राप्त गर्न, हामी प्राय: प्लास्टिकको केसको सतहमा विशेष उपचार गर्दछौं।
जस्तै: बनावट, उच्च चमकदार, स्प्रे पेन्टि,, लेजर कुँदिएको, तातो मुद्रांकन, इलेक्ट्रोप्लेटि and र यस्तै। यो अग्रिम उत्पादनको डिजाइनमा ध्यानमा राख्नु आवश्यक छ, त्यसपछिको प्रकृया हासिल गर्न सकिँदैन वा आकारको परिवर्तनले उत्पाद सम्बन्धीलाई असर गर्दछ।
अघिल्लो: मोल्ड बनाउने
अर्को: मोल्ड कास्टिs मोल्डहरू
धातु थ्रीडी प्रिन्टिंग